Imibuzo evame ukubuzwa - Higee Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
Amanani ethu anikezwa ngendlela efanelekile, ezokhonjelwa kuyo yonke imininingwane edingekayo namandla adingekayo kumakhasimende. Ngemuva kokuthi yonke imininingwane iqinisekisiwe sizonikeza isiphakamiso esifanele ngentengo.
Yimiphi imininingwane edingekayo yekhotheshini?
1.Capacity of umshini ufuna.
2. Usebenzisa ibhodlela noma iphakethe elingakanani?
3. Yimuphi omunye umshini ohlobene odingekayo?
4. Noma iyiphi enye imfuneko?
Yebo, singanikeza yonke imibhalo yokuthumela imvume yakho yangokwezifiso, kufaka phakathi isikweletu sokulayisha, i-invoyisi, uhlu lokupakisha. Uma usadinga amanye amadokhumenti, sicela usazise ngaphambi kokuthumela.
Kuya ngomshini, imvamisa kumshini ngamunye, kusuka ezinsukwini eziyi-15-30, kulayini ophelele onamandla amakhulu, mhlawumbe udinga izinsuku ezingama-45-60.
Imvamisa yi-TT, idiphozi engu-50% kusengaphambili, ibhalansi engu-50% okufanele ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa.
Ikhwalithi yisiko lethu. Njengomkhuba ngamunye, sinikeza isiqinisekiso sonyaka owodwa kanye nensizakalo ende yokuphila.
Yebo, sisebenzisa ukuthekelisa kwekhwalithi ephezulu.
Izindleko zokuthumela zincike endleleni okhetha ngayo ukuthola izimpahla. Izimpahla zasolwandle zivame ukusetshenziswa. Izindleko zincike ethekwini ofuna sithumele kulo izimpahla. Uma ufuna ukukhetha ukuthuthwa kwomoya komshini omncane nakho kuyatholakala ukuhlela. Ezingxenyeni ezisele, imvamisa izosebenzisa i-express. Izindleko zizoqinisekiswa ngaphambi kokuthumela noma ukuphetha i-oda.